Izany dia noho ny filazan’ny olona fa novarotan’io olom-boafidy io ny tany mirefy telo kilaometatra tora-droa. Vola mitentina 300 tapitrisa ariary no azony raha araka ny fokonolona hatrany. Efa nanao hetsika fanairana ny olona tamin’ny volana aprily lasa teo saingy tsy nahitam-bokany. Izao dia nitombo ny hatezerana ary mizotra mankany amin’ny fitsaram-bahoaka.
FANAFIHANA MISESY ENY AMBOHIDRATRIMO
Manao sesilany ny fanafihana mitam-piadiana ao Ambohidratrimo. Sinoa iray izay tompon’ny orinasa Fhan Mada no nidiran’ny enin-dahy mitam-piadiana tao an-tranony. Norahonana ny mpiambina ary napoaka ny basy. Vola mitentina 23 tapitrisa ariary no lasa niampy solosaina. Nisy olona saika hanavotra saingy notifirin’ireo mpanafika avy hatrany ka naratran’ny bala. Intelo izany tamin’iny faran’ny herinandro iny ny fanafihana izay nitranga tao Ambohidatrimo.
EFA-DAHY NITONDRA KALACHNIKOV
Efa-dahy nitondra kalachnikov ary nandeha 4L fourgonette no naka an-keriny an’i Richi Chandarana tetsy Andakana raha handeha hilalao Golf. Ny fiara marika Touareg izay an’ilay karàna ihany no nitondràna azy nizotra taty an-drenivohitra. Mbola tsy hita io fiara io hatramin’ny omaly ary tsy mbola nahazoam-baovao ihany koa ilay karàna. Tsiahivina fa vao amam-bolana vitsy koa izay no nangalan’ny jiolahy ny dadany tetsy Antanimena, mbola fakàna an-keriny ihany koa.
Nanazava koa ny depiote sasany izay manohana ny fanjakàna, toa an’i Milavonjy Philibert fa tsy avy amin’izy ireo i Ntsay Christian ary tsy nanolotra anarana velively aza izy ireo. Mifanohitra amin’ny filazan’ny depiote Jaona Elita ihany izany nefa raha mitombina kosa ny filazan’itsy voalohany (Milavonjy) dia mazava izany fa ny lohan-dRajaonarimampianina ihany no nataony ary tsy nihaino na iza na iza izy tamin’iny fanendrena Praiminisitra iny.
Tale Jeneralin’ny Birao iraisam-pirenena amin’ny asa, mpanolon-tsaina manokan’ny minisiteran’ny varotra tamin’ny 1985 ary minisitry ny fizahan-tany tamin’ny taona 2002, tale jeneralin’ny orinasa Solima. Izay no fantatra momba an’i Ntsay Christian hatreto, ankoatry ny maha-anadahin’i Manorohanta Cécile (minisitry ny fampianarana ambony ary minisitry ny fiarovana koa tamin’ny andron-dRavalomanana). Tsy nanana firehana politika mazava ity praiministra vaovao ity ary eo indrindra no maha-talanjona ny maro tamin’ny fanendren’ny filoha azy.
HOTSARAINA ILAY NAMONO NY VADINY
Anio no hatolotra ny fampanoavana ao Ambatolampy i Tahina, ilay rangahy izay namono nahafaty ny vadiny tao Behenjy. Omaly no nametraka ny taratasy fitoriana ny fianakavian’ny maty rehefa avy nahavita ny fandevenana ny alahady lasa teo. Mangataka ireo fianakaviana ny mba hamindràna ny fanadihadiana aty an-drenivohitra satria heloka bevava ny raharaha. Ny fanirian’izy ireo dia ny mba hanidiana ny nahavanon-doza any amin’ny fonjan’ny Tsiafahy.
NISANDOKA HO LIETNA
Zandary iray izay misandoka ho Lietnà no voasambotra tao Ranomafana-Est. Olona maro no nambakainy saingy mba tsy tontosa ary zandary ihany aza ny sasany. Milaza ho miasa ao amin'ny Toby Ratsimandrava ary mahavita "affectation" sy ny maro hafa. Hatolotra ny fampanoavana anio ity mpisandoka ity.